လူတိုင်းသည် စီးပွားရေးကို လုပ်ကြသည်- စားသုံးခြင်း၊ ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ စုဆောင်းခြင်း (လစာ၊ ထောက်ပံ့ကြေး၊ အမြတ်ဝေစုစသည်ဖြင့်)၊ ၎င်းတို့ကို ဖြုန်းတီးခြင်း၊ ရင်းနှီးမြုပ်နှံခြင်း၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း - အလိုအလျောက်နေ့စဥ်လုပ်ဆောင်မှုများနီးပါး ရောနှောပြီး လုပ်ဆောင်ရန် လွယ်ကူသော ဆုံးဖြတ်ချက်များ မလိုအပ်ပါ။ စီးပွားရေးအကြောင်း လူတိုင်းပြောကြသည်- ရေဒီယို၊ အင်တာနက်၊ ရုပ်မြင်သံကြားသတင်း၊ စီးပွားရေးကဖေး (အစစ်အမှန် သို့မဟုတ် ပကတိ) တွင် မိသားစုနှင့်အတူ၊ ဒေသဆိုင်ရာ kiosk တွင် - မှတ်ချက်များ၊ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန် မလွယ်ပါ။ ဝေစုကို လုပ်ပါ။
အခြားတစ်ဖက်တွင်မူ လူတိုင်းသည် စီးပွားရေးဘာသာရပ်တွင် ပါဝင်ရန် ဆုံးဖြတ်ကြသည်မဟုတ်။ သငျသညျ, သင်စဉ်းစားပါ။ ဒါပေမယ့် ဘာကိုမျှော်လင့်ရမလဲ သိလား။ သင်လေ့လာရမယ့် ဘာသာရပ်တွေအတွက် စိတ်ကူးရှိပါသလား။ သင်ပေးမယ့် မတူညီတဲ့ သင်တန်းတွေ ? မင်းရဲ့ တက္ကသိုလ်သင်တန်း ပြီးဆုံးချိန်မှာ စီးပွားရေး အလုပ်အကိုင်တွေ ဖြစ်လာနိုင်လား ? သင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ကို အသိပေးရန်အတွက်၊ ဤ MOOC သည် ဤမေးခွန်းများကိုဖြေဆိုရန် ကြိုးစားသည်။
ဂေဟစနစ်က ဘယ်သူ့အတွက်၊ ဘာအတွက်လဲ။ ဒီဇင်ဘာလ 17, 2021Tranquillus
ဖတ်ရန် National protocol: အသစ်သောအကွာအဝေး, အမျိုးအစား 1 မျက်နှာဖုံးနှင့်လေဝင်လေထွက်
အောက်ပါIUT ထည့်သွင်းခြင်း- သင့်ဖိုင်ကိုမြှင့်တင်ရန် ကုဒ်များ